NamasteNEPALI.com: अमेरिकामा नेपालीले श्रीमतीबाट किन धोका पाउँछन् ?
अमेरिकामा नेपालीले श्रीमतीबाट किन धोका पाउँछन् ?
सम्बन्ध व्यक्तिगत जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । अब अमेरिकामा मात्र पत्नीले पतिलाई धोका गर्ने मात्र नभएर हाम्रो मुलुकमा पनि यसको रोग बेतोडसँग झ्याङ्गिन थालेको छ । बैबाहिक जीवनको गाँठोमा बाँधिएको केही समयमा नै महिलाले पारपाचुके माग्ने नेपालमा प्रशस्त हावा चल्न थालेको छ । पति तथा ससुरालीसँग मनग्गे पैसा लिने र अर्को विवाह गरी विदेश हानिने अब सामान्य हुन थालेको छ । र, पुरुषले पनि पत्नी हुँदाहुँदै अर्की ल्याउने प्रचलन बढ्न थालेको छ ।
विश्वमा महिलाले पुरुषको तुलनामा आफ्ना पति या प्रेमीलाई जीवनकालमा धोका दिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । दुईमध्ये एकले आफ्नो सम्बन्धमा असन्तुष्टि देखाउँदै जीवन अग्रगामी दिशामा जान नसक्ने भविष्य देखेपछि दुई ध्रुब फर्कने निधो गर्ने चलन समाजमा बढ्दो अवस्था भैरहेको छ ।
बिवाहित रहेका जोडीमध्ये एकले धोका दिनेपछि यस्तो घटनाचक्र बढ्न थालेको छ । जोडीले अर्कोसँग प्रेम चक्करमा परी डेटिङ्ग गर्ने सुरुवात गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार महिलाहरुले समग्र प्रतिशतमा पुरुषहरू भन्दा तुलनात्मक रुपमा अधिक धोका दिने गरेको पाइएको छ भने बिबाहित पत्नी या संगै लाइफ टुगेदारमा रहेका महिलाले ज्यादा विश्वासघात गरेको देखाएको छ ।
ब्रम्हाण्डभर १७ प्रतिशत यही बिश्वासघातको कारण बैबाहिक जीवनको सम्बन्धबिच्छेद हुने गरेको पाइएको छ । जसअनुसार प्रत्येक १ सयमा १७ जोडीले सम्बन्धबिच्छेद एक अर्कामा धोका दिने गरेको कारण हुन् पुगेको छ ।
५० देखि ६० प्रतिशत जुन महिलाहरु ज्यादा महानगरी क्षेत्र ,घनाबस्ती, ठूला शहर या अहोरात्र चलायमान हुने शहरमा बसोबास गर्ने महिलाहरुले धोका दिने गरेको स्वीकार गरेका छन् । आश्चर्यको तथ्यांक यो रहेको छ कि बिबाहित जीवनमा रहेका करिब ४५ प्रतिशत महिलाहरुले बिश्वभरमा आफ्ना पति–प्रेमीलाई धोखा दिने ज्यादा सम्भावना रहेको छ ।
अमेरिकाको नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेन्टरले २०१० मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार पुरुषहरुले धोका दिने २१ प्रतिशत यथावत रहेको परिणाम निकालेको छ भने महिलाहरुले प्रेमी या लोग्नेलाई बिश्वासघात गर्नेमा १४.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखाएको छ भने अझ यो बृद्धि प्रत्येक बर्ष फराकिलो हुँदै आएको देखाएको छ ।
अमेरिकाको प्रसिद्ध टेलिभिजन फक्सका निर्माताले गरेको एक सर्वेक्षणमा हाल किन महिलाहरुले ज्यादा धोका दिन्छन् यदि हो भने किन भनि राखेको प्रश्न राखेका थिए । बस् तथा स्याकलफोर्डको अध्ययन अनुसार अमेरिकाका ५० देखि ६० प्रतिशत जोडीले जीवनको कुनै कालखण्डमा गएर एक अर्कालाई धोका या बिश्वासघात गर्ने गरेको तथ्य निकालेको छ ।
बैबाहिक जीवनमा बाँधिएको लामो समयपश्चात पुरुष या महिलाले आखिर किन बिश्वासघात गर्ने या धोखा दिने गर्छन त ? र, केहि बर्षदेखि महिलाहरुले धोका दिने क्रममा किन वृद्धि हुँदै गैरहेको छ । यसका कारण यसरी ब्याख्या गरिएको छ ।
काममा पुरुष तथा महिलालाई समानता भएको कारण महिलाहरुलाई अमेरिकामा आर्थिक स्वतन्त्र बनाएको छ, जस्को कारण महिलाहरु आर्थिक स्वतन्त्र हुन्छन् । जसको कारण महिला कसैको भरोसामा बाँच्न बाध्य हुँदैनन् । महिला कसैको आदेश र नियन्त्रणमा बस्न नचाहने हुनाले परिस्थिति खराब हुँदै धोका दिन सुरु गर्ने देखाएको छ । र, नेपालमा पनि महिला आत्मनिर्भर, शिक्षित तथा सशशक्तिकरण भएकोले अहमता बन्दै दुईतर्फ मुख फर्कने सरल रुपमा लिने भैसकेको अवस्था पनि देखा परेको छ ।
शारीरिक सन्तुष्टिको ख्याल नगर्ने र इच्क्षाहरु पूर्ति नगर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि यसमा महिलाहरु साबधान रहन्छन । महिला तथा पुरुषका शारीरिक आवश्यकता तथा आनन्द फरक हुन्छ । जसको कारण त्यो प्राप्त गर्न पनि कैयौँ महिलालाई धोका दिन बाध्य गराउँदछ ।
कैयौँ महिलाले आफ्नो आत्मसम्मानलाई प्रोत्साहन गर्न आफ्नो जोडीलाई धोका दिने गर्छन । पुरुषलाई बिश्वासघात गर्नु या धोका दिनु र अर्कैलाई ध्यान दिने गर्नाले महिलाले आफूलाई महत्वपूर्ण तथा शोभायमानको अनुभूति गर्दछन् ।
सम्बन्ध स्थापित भएको एक निश्चित समयपछि हरेक कुराको बिषयमा एक अर्कामा हिस्सा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, चर्चा गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै मन्द बिन्दुमा त्यो नहुन जाँदा अलिक संचारको कमी हुन जान्छ । बिबाहित महिला जो अत्याधिक समय घरमा बिताउने हुनाले उनीहरु दिक्दार तथा उदास हुन्छन् । उनीहरु पिंजडामा कैद भएको महसुस गर्छन् । र, त्यो भाबुकताको जरूरत प्राप्त नगरेपछि नयाँ कथासंगै नयाँ पुरुषसँग प्राप्त गर्ने हुन्छन् । पुरुष बाहिर मात्र हिड्ने र महिला चाँहि घरको चार दिवारमा बस्नुपर्ने सोचिदिंदा कुरा गडबड हुने र सम्बन्ध बिच्छेद हुन् पुग्दछ ।
केवल भाबुकताको आवश्यकतालाई प्राप्त गर्न मात्र धोका दिने र उक्त कुरा नयाँ व्यक्तिसँग पाउने भएकोले महिलाहरु पुरुषको तुलनामा ज्यादा धोका दिने गरेको देखिएको छ ।
धोका दिने महिलाले अपनाउने सबैभन्दा साधारण तथा सामान्य कारण हो, सम्बन्ध । बिबाहित महिला भैरहेको सम्बन्ध टुटाउन चाँहदैनन् । भयभित हुने हुन्छन् । जब महिलाले सम्बन्ध टुटाउन चाहना राख्दछन् अनि महिलाबाट पति या प्रेमीलाई धोका दिन सुरु गर्ने गर्छन् । यदि महिलालाई पुरुषले अरु कोहीसँग रंगेहात पक्राउ गरे भने त्यहीँ सम्बन्ध टुक्रिन्छ । यदि पक्राउ भएन भने प्रेमीसंग सौभाग्यशाली भएको अनुभूति गर्दछन् ।
सुन्दरी महिलाको चुलबुले तथा धोखापूर्ण प्रवृति बैज्ञानिक कारणबाट ब्याख्या यसरी गरिएको छः जुन महिलाको आकर्षित अनुहारका कृतिहरु जस्तै गालाको ठुलो हड्डी तथा अति मिलेको मुखाकृति बनावट नै महिलाको शरीरमा हर्मोन ईस्ट्राडिओल ज्यादा मात्रामा भएको हुन्छ । जुन महिलाको गर्भाशयको हर्मोन हो ।
जसको कारण महिलालाई ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा सुन्दरीको साथै ज्यादा उर्वर भएको अनुभूति आन्तरिक रुपमा गराउँदछ। सुन्दरी महिलाहरु अत्याधिक परिणाममा ईस्ट्राडिओल भएको कारण शरीरमा आत्मविश्वास बढ्ने र जसको कारण असन्तुष्टि देखाउँदै आफ्नो पति या प्रेमीलाई धोका दिने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो समाजमा पुरुषहरुले मात्र आफ्ना पत्नी या प्रेमिकालाई धोका दिने र बिश्वासघात गर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा गलत तथा असत्य हो भने कैयौँ महिलाले पनि आफ्ना पति या पत्नीलाई धोका दिएको कैयौँ प्रमाण तथा उदाहरण अमेरिकामा छन् ।
महिलाहरु पहिलाको तुलनामा काममा ज्यादा देखिन्छन् र पुरुषसँग उनीहरु संगतमा पर्ने हुन्छन् । अहिले पुरुषहरु घरमै काम गर्ने र महिला बाहिर गएर काम गर्ने पनि परिपाटी भएको कारण पनि त्यहाँबाट पनि महिलाले चिटिङ गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसको अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सरल रुपमा धोका गर्न सजिलो बनाइदिएको सर्वेक्षण र अन्तर्वार्ताले देखाएको छ । धेरै महिलाले चलचित्रमा गरिएको प्रेम र रोमान्चकको कारण यस्तै परिकल्पना गर्ने समेत गरेको तर वास्तविक बैबाहिक जीवनमा त्यो यथार्थतामा नपाउने हुनाले त्यहाँबाट पनि बिश्वासघात गर्ने गरेको कबुलेका छन् ।
महिलाहरुले वास्तबमा दिलैदेखि भावनात्मक रुपमा जोडिएको पुरुषलाई मन पराउने हुन्छन् । पुरुष धोकेबाजले गरे जस्तै महिलाले पनि बिबिध कारणले धोका दिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । उनीहरु आकर्षित भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन ,जवान हुन् चाहना राख्नुको साथै भावनात्मक रुपमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छन। अमेरिका र बिश्वमा दम्पत्तीले यसरी एक अर्कामा धोका दिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ भने यसले नेपाली समुदायलाई कति प्रतिशतले छुन्छ त्यो पनि सोध र अनुसन्धानको बिषय पनि हुन् सक्छ । यस कुटनीतिमा भित्र तपाई र हामी कतै संलग्न त छैनौ ? यसले नेपाली समुदायमा कस्तो सन्देश दिन्छ ? त्यो नेपाली समुदाय र नेपाली समुदायका सदस्यले घोत्लिनु पर्ने हुन्छ ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत मामलाको कुरा हुन् । निजी जीवनका मुद्धाहरु हुन् । यो एउटा तथ्य मात्र पस्किने जमर्को गरिएको हो । कुनै पनि महिला या पुरुषको चरित्रप्रति प्रश्न उठाउने उद्देश्यले कलम चलाइएको हैन । कुरा दोचार्ने नियत पनि कदापी हैन ।
कसैको चियोचर्चो गरी कालो कर्तुत पर्दाफास गर्ने अभिप्राय पनि हैन । धोका दिने सोचाइको कहिले अन्त्य हुदैन । जस्को कारणले पुरुष या महिलाको मन तथा हृदय टुटदछ । जस्ले जटिल तथा अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याइदिन्छ ।
Labels: ABROAD, MAIN, NEWS, PASSION